Home Wararka Turkiga oo duqeeyay Kurdiyiinta Ciraaq iyo Suuriya
Turkiga oo duqeeyay Kurdiyiinta Ciraaq iyo Suuriya
Wasaaradda Difaaca dalka Turkiga, ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay duqeeyeen goobo ay Kurdiyiintu Ciraaq iyo Suuriya ku sugan yihiin, kuwaas oo ay ka mid yihiin xeryaha tababarka, dhufeysyo iyo goobaha lagu kaydiyo Rasaasta.
Wasiirka Difaaca Turkiga, Hulusi Akar, ayaa sheegtay in hawlgalkaasi lagu guuleystay, isla-markaana lagu dilay “argagixiso badan”. “Kaliya argagixisada iyo bartilmaameedyo ay leeyihiin ay ku jiraan, hoyga, dhufeysyada, huteello, iyo godadka la soo dejiyey madaxdooda ayaa la garaacay. Argagixisadu waxay mar kale dareemeen neefta ciidamada qalabka sida ee Turkiga oo qoorta ka saaran,” ayuu yiri Akar.
Previous articleDoorashada Kuraas ka mid ah golaha shacabka oo maanta ka dhacaysa Muqdisho
Next articleAmniga GalMudug oo faraha ka baxay & rag hubeysan oo xirtay…
Al Shabaab oo weerar gaadmo ah ku qaaday ciidamo ku sugnaa...